Su'aalo iyo jawaabo • E-hälsomyndigheten
Tjänster Covidbevis About Digital COVID Certificate in other languages Waxay cadeynta covid-ku dhib yareynaysaa safarka Su'aalo iyo jawaabo
Waxaad halkan ka helaysaa su'aalaha aanu caadi ahaan helno.
Ma inaan Cadeynta covid-ka haystaa si aan ugu safro?
Maya, Cadeynta covid-ka shuruud uma aha si loogu safrayo Midowga Yurub gudahiisa. Shahaadada tallaalka ee dhijitaalka ah, ee Iswiidhan looga yaqaano Cadeynta covid-ka, ayaa loo soo saarayaa si safarada wadamada kale ee ka tirsan Midowga Yurub lagu tagaayo loogu fududeeyo.
Waxa bogga internetka ee Folkhälsomyndigheten ku jira macluumaad loogu talogalay qofka qorsheynaaya inuu safro.
Wadamada qaarkood ayaa dalbanayaan cadeyn muujineysa inaan la qabin covid-19 si aad wadanka ugu gasho. Wadamada kale ayaa cadeyn dalbanaaya si ay muwaadiniintoodu wadanka dib ugu soo laabtaan oo aanay inay is karantiimeeyaan u baahan. Waxay wadamada kala duwani dalbanayaan shahaadooyin kala duwan, waa inaad sidaas darteed ka war hayso waxa wadanka aad u safrayso khuseeya.
Marka hore Wasaarada arrimaha dibadda (Utrikesdepartementet ama UD) ka raadso macluumaad ku saabsan safarada wadanka dibadiisa. Waxaad bogga internetka ee safaaradaha ee Sweden Abroad ku jira macluumaad ku saabsan sharciyada dalalka kala duwan. Waxa app-ka Wasaarada arimaha dibadda ee Resklar uu kuu fududeynayaa waxyaalaha khuseeya meesha aad u safrayso.
Goorma ayay suurtogal noqonaysaa in Cadeynta covid-ka la helo?
Waxay hey'ada E-hälsomyndigheten qorsheyneysaa in adeegga elektarooniga ah ee Cadeynta covid-ka la furo 1 Luulyo.
Sidee ayuu nidaamka lagu helaayo Cadeynta covid-ka u dhacayaa?
Waa Hey'ada E-hälsomyndigheten cida ka masuulka ah adeega elektarooniga ah ee Cadeynta covid-ka ee bixineysa cadeynta tallaalka.
Gobollada ayaa mas'uul ka ah in tallaalada la sameeyey la soo galiyo diiwaanka tallaalka ee qaranka (NVR) ee Folkhälsomyndigheten. Marka Cadeynta tallaalka la dalbado iyadoo la soo maraayo adeega Cadeynta covid-ka ayay dadka degaanka ahi codsanayaan in qoraal NVR looga soo saaro, waana taas waxa gundhiga u ah Cadeynta covid-ka.
Waxa cadeynta toos loogu dirayaa sanduuqaaga dhijitaalka ah. Haddii aanad saduuqa dhijitaal ah laheyn ayaad mid halkan ka furan kartaa. Cadeynta covid-ka ayaa sidoo kale la keydsan karaa oo la daabacan karaa.
Maxaa Cadeynta covid-ka ku jira? Miyaan adeega elektarooniga ah ka heli karaa natiijada tijaabada iyo cadeyn muujineysa inaan jirada ka bogsaday?
Nooca ugu horeeya ee adeega elektarooniga ah ee Cadeynta Covid-ka waxa kaliya ku jiraa waa cadeyn muujinaysa in covid-19 laaga tallaalay.
Shaqo ayaa socota in xitaa la cadeyn tijaabo muujineysa inaan lagaa helin covid iyo cadeyn in jirada laga bogsada ay ka qeyb noqoto sida waafaqsan sharciyada soo socda ee Midowga Yurub‑. Waxa cadeynta in jirada laga bogsadey loola jeedaa in la tusi karo tijaabo ay qaadeen shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bukaanka ugu yaraa toban maalmood ka hor oo muujinaysa in covid-19-la qabo.
Xagee ayaan Cadeynta covid-ka tusayaa?
Waa in Cadeynta covid-ka la tusaa meelaha ay ka midka yihiin marka xadka laga gudbaayo ee ID-ga la eegaayo. Waa inaad cadeyntaada covid-ka haysato intaad safrayso oo dhan.
Xusuusnow inaad wakhti ku haboon safarka ka hor aad eegto waxyaalaha khuseeya wadankaad u safrayso. La soo deg app-ka UD Resklar si aad u hesho macluumaad hadda jira ee halka aad u safrayso ku saabsan. Waxay sidoo kale safaaradahu hayaan macluumaadka socdaalka ee xilligaas taagan ee ku jira Sweden Abroad.
Maxaan anigu u baahanahay si aan Cadeyntayda covid-ka ugu helo?
Waxa laga bilaabo 1 Luulyo adeega elektarooniga ah ee Cadeynta covid-ka ku jira cadeyn tallaalka covid-19. Si loogu helo Cadeynta covid-ka ee dhijitaalka ah ayaad u baahan tahay inaad iska tallaashay. Si aad ugu soo gasho adeega elektarooniga ah, ayaad u baahan tahay aqoonsi Iswiidhishka ee elektaroonig ah.
Haddii aanad aqoonsi elektaroonig ah haysan ayaad taas ka sameysan kartaa adigoo soo maraaya Skaffa e-legitimation | Elegitimation
Qofka aan haysan aqoonsi elektaroonig ah oo shaqeynaaya ayay sidoo kale ay suurtogal u noqon kartaa inuu codsado Cadeynta covid-ka marka 1 Luulyo laga bilaabo. Laakiin waa inaad lambarka shakhsiga ee Iswiidhishka ah haysato oo dabcan lagu tallaalay.
Laga bilaabo 1 Luulyo ayaad ka dalban kartaa hey'ada E‑hälsomyndighetenn – foom ogolaansho ayaa markaa laga heli doonaa bogga internetka ee E‑hälsomyndigheten. Waxaad markaas ka dib heli doontaa Cadeyntaada covid-ka oo warqad ku qoran oo lagu soo diraayo cinwaanka dadweynaha ee aad ka diiwaangashan tahay. (Waxaan suurtogal aheyn in la sii hor dalbado ama Cadeynta covid-ka horey loo sii helo maadaama oo sharciga Midowga Yurub uu dhaqan geli doono laga bilaabo 1 Luulyo.)
Waxay E-hälsomyndigheten ka shaqeynaysaa inay xitaa soo saarto cadeyn tijaabo muujineysa inaan lagaa helin covid‑19‑ iyo cadeyn in laga bogsaday inay ka qeyb noqoto.
Ma haysto aqoonsi elektaroonig ah, maxaan sameeyaa markaas?
Halkan ayaad ka helaysaa macluumad ku saabsan sida aad sameynayso: Aqoonsiga elektarooniga ah ka sameyso | Elegitimation (e-legitimation.se)
Qofka aan haysan aqoonsi elektaroonig ah oo shaqeynaaya ayay sidoo kale suurtogal u noqon doontaa inuu Cadeynta covid-ka codsado marka 1 Luulyo laga bilaabo. Laakiin waa inaad lambarka shakhsiga ee Iswiidhishka ah haysato oo dabcan lagu tallaalay.
Laga bilaabo 1 Luulyo ayaad sidoo kale ka dalban kartaa hey'ada E‑hälsomyndighetenn – foom ogolaansho ayaa markaa laga heli doonaa bogga internetka ee E‑hälsomyndigheten taariikhda 1 Luulyo. Waxaad markaas ka dib heli doontaa Cadeyntaada covid-ka oo warqad ku qoran oo lagu soo diraayo cinwaanka dadweynaha ee aad ka diiwaangashan tahay.
(Waxaan suurtogal aheyn in la sii hor dalbado ama Cadeynta covid-ka horey loo sii helo maadaama oo sharciga Midowga Yurub uu dhaqan geli doono laga bilaabo 1 Luulyo.)
Ma isticmaali karo aqoonsi elektaroonig ah, maxaan sameeyaa markaas?
Haddii aanad fursad aad ku isticmaasho aqoonsiga elektarooniga ah haysan ayaa laga bilaabo 1 Luulyo caddeynta tallaal ka dalban kartaa hey'ada E-hälsomyndigheten. Waxaad taas ku sameynaysaa adigoo daabacanaaya, buuxinaaya oo boostada foomka hey'ada ugu soo diraaya. Markaas ka dib ayay Hey'adu dawladu cadeyntaada tallaalka ku soo direysaa cinwaankaaga dadweynaha ee aad ka diiwaangashan tahay. Ka fikir inaad cadeyntaada covid-ka dalbato wakhti wanaagsan safarkaaga ka hor.
Ma inaan sanduuqa boostada oo dhijitaalka ah haystaa si aan u helo Cadeynta covid-ka?
Maya, wax shuruud ah ma aha in sanduuqa boostada ee dhijitaalka ah la yeesho, laakiin way ka haboon tahay oo ay ka ammaan badan tahay iyadoo ah meel si fiican wax lagu keydsado. Waxaad sidoo kale keydsan kartaa oo aad toos uga daabacan kartaa Cadeyntaada covid-ka qalabka dhijitaalka ah ee aad isticmaaleyso.
Ma inaan Cadeynta covid-ka lacag ka bixiyaa?
Maya, waa bilaash.
Sidee ayaan dhakhso ugu helayaa Cadeynta covid-ka marka la i tallaalka ka dib ?
Waa in marka hore tallaalka la soo wargeliyaa Diiwaanka tallaalka ee qaranka (NVR). Waxay sidaas darteed qaadan kartaa ilaa todoba maalmood ka hor intaad Cadeynta covid-ka helayso. Adeega elektarooniga ah ee Cadeynta covid-ka waxa la furayaa 1 Luulyo iyadoo aanay suurtogal aheyn in la sii hor dalbado ama cadeyn markaas ka hor la helo.
Xasuusnow in xaaladaha qaarkood aad heli karto Cadeynta covid-ka ka hor intaan taas galitaanka wadan loo isticmaalin. Maanta waxa tusaale ahaan jira dalal dalbanaaya inay 14 maalmood ka soo wareegeen markii dawska ugu danbeeya ee tallaalka la qaatey si tallaalka loogu aqbalo. Waxaad sidaa darteed u baan tahay inaad iska hubiso xeerarka dalka aad u safreyso ka jira.
Wakhti fiican ka hore soo ogow waxa meesha aad u safrayso ka shaqeynaaya, fiiri app-ka Resklar ee Wasaarada arrimaha dibadda iyo bogga internedka ee safaardaha ee Sweden Abroad.
Miyey wax micno ah sameynaysaa nooca tallaalka ee aan qaatey?
Dhamaan tallaalada covid-19 ee Iswiidhan laga qaato ayaa loo ansixiyay in Cadeynta covid-ka lagu qaato.
Miyay Cadeynta covid-ka shaqeynaysaa haddii aan laba tallaal oo kala duwan qaatey.
Ka dib markaad is tallaasho ayaad heli doontaa Cadeynta covid-ka oo ay ku jiraan macluumaad tallaalkaaga ku saabsan (xitaa haddii ay laba tallaal oo kala duwan yihiin).
Sida waafaqsan sharciga Midowga Yurub ayaa Cadeynta tallaalka la siin doonaa qof kasta oo laga tallaalayo covid-19, iyadoo aan tallaalka loo eegin. Wadamadu waa inay aqbalaan Cadeynta tallaalka ee tallaallada ay Midowga Yurub ansixisay.
Intaa waxa dhaafsan ayay wadanka khuseysaa waxa ay yihiin xeerarka shaqeynayaa. Waa inaad adigu wakhti fiican oo ku haboon soo ogaato waxyaalaha khuseeya wadanka aad u safrayso. La soo deg app-ka UD Resklar si aad ugu hesho macluumaadka hadda jira ee halka aad u safrayso ku saabsan. Waxay sidoo kale safaaradahu hayaan macluumaadka socdaalka ee xilligaas taagan ee ku jira Sweden Abroad.
Ma waxa loo baahan yahay laba daws ka hor inta la dalban karo Cadeynta covid-ka mise hal daws ayaa ku filan?
Waxaad Cadeynta covid-ka ku dhigan nooca tallaalka ee aad qaadatey iyo inta daws ee lagu siiyey. Markaad dawskaagii koowaad qaadatey ayaa Cadeynta covid-ka heli kartaa.
Xeerarka ku saabsan haddii hal ama laba daws la qaatey ayaa kala duwanaan kara wadamada kala duduwan. Waa waddanka aad booqaneyso cida go'aaminaya waxa tahay shuruuda halkaas ka shaqeynaysa. Sidaas darteed waa inaad wakhti fiican ka hore soo ogaato waxa shaqeynaaya, fiiri app-ka Resklar ee Wasaarada arrimaha dibadda iyo boggooda internetka ee safaardaha ee Sweden Abroad.
Ma waxa ku filan in la is tallaalay uun mise waxa sidoo kale loo baahan yahay tijaabo PCR-ah?
Way kala duduwanaan kartaa wadamada kala duduwan. Waa waddanka aad booqaneyso cida go'aaminaya waxa tahay xeerarka halkaas khuseeyaa. Sidaas darteed waa inaad wakhti fiican ka hore soo ogaato waxa shaqeynaaya, fiiri app-ka Resklar ee Wasaarada arrimaha dibadda iyo boggooda internetka ee safaardaha ee Sweden Abroad.
Miyuu ilmaheygu u baahan yahay Cadeynta covid-ka inuu haystaa si uu ugu safro?
Ujeedad laga leeyahay Cadeynta covid-ka waxay tahay in safarada Midowga Yurub dhexdooda ah ay kuu dhib yareyso. Wakhtigan xaadirka ah ayaan guud ahaan carruurta la siinin tallaalka covid-19 iyadoo sidaa darteedna aanay cadeynta tallaalku guud ahaan khuseynin carruurta.
Waxa socota shaqo in xitaa la soo saaro cadeyn tijaabo muujineysa inaan lagaa helin covid‑19‑ iyo cadeynta jirada kugu dhacday ay ka qeyb noqoto Cadeynta covid-ka. Sida sharciga horudhaca ah ee Midowga Yurub ku xusan waa in carruurtu ay xitaa heli kartaa Cadeynta tallaalka iyo sidoo kale cadeymaha kale ee soo socda. Sida ay taasi Iswiidhan ugu dhaceyso ayaan ilaa hadda kala cadeyn.
Xasuusnow inaad hadd iyo jeer ogaato waxa ay yihiin sharciyada waddanka aad u safreyso ka shaqeynaaya. Wasaarada arimaha dibada ayaa haysa macluumaad ku saabsan waxa ka shaqeynaaya wadanka aad u safrayso.
Miyaa Cadeynta covid-ku shaqeyn doontaa xaaladaha kale ee aan safarka aheyn, tusaale ahaan sida riwaayadaha, bandhigyada tiyaatarka iyo kulamada isboortiga?
Waxa Cadeynta covid-ka loo habeeyey si ay ugu buuxiso shuruud caalami ah iyadoo looguna talogalay inay dhibyareyso safarka wadanka dibadiisa ah. Waa in la tusi karaa meelaha ay ka midka yihiin marka xadka laga gudbaayo ee ID-ga la eegaayo.
Waxa taariikhda 27 ka Maayo ay xukuumadu sheegtay inay xitaa eegayso haddii ay suurtogal tahay in muddo xaddidan Cadeynta tallaalka ama wax la mid ah loo isticmaalo kulammada dadweynaha iyo dhacdooyinka dadweynaha qaarkood. Waxay xukuumada badhtamaha Juunyo dib ka sheegi doontaa waxay taas ka qabto.
Miyaa tijaabadeyda muujineysa difaaca jirka ee in jirada la iga helay ahi ay ku jirtaa Cadeynta covid-ka?
Difaaca jirku ma aha wax shaqeynaaya si aad ugu hesho cadeynta tallaalka oo dhijitaal ah oo in laga bogsadey ah sida waafqsan sharciga Midowga Yurub. Waa kaliya tijaabo hore oo NAAT (PCR) oo muujineysa in lagaa helay oo ay qaadeen shaqaalaha daryeel caafimaad ama shaqaalaha tijaabo qaadista ee loo tabobaray (oo aan aheyn waxa uu qofku iska qaadaayo) waxa shaqeyn doona ee loo isticmaali karo Cadeynta covid-ka.
Waxa cadeynta in laga bogsadey ugu horeyn la soo saari doonaa kow iyo toban maalmood ka dib marka tijaabo NAAT- ah (PCR) ay muujisay in la qabo jirada. Waxay shaqeyn doontaa 180 maalmood laga bilaabo natiijada ugu horeysa ee muujineysa in la qabo jirada.
Ma suurtogal baa in Cadeynta covid-ka la helo 1 Luulyo ka hor?
Waxay E-hälsomyndigheten u baahan tahay gundhig sharci si ay ugu maareyso xogta shakhsiga ee Cadeynta ku jirta. Waxa gundhiga sharciga lagu salaynayaa qawaaniinta Midowga Yurub iyo sharci Iswiidhish ah oo cusub kaas oo dhaqan gali doona 1 Luulyo ee sanadkan. Iswiidhan ayaa wakhtigan xaadirka ah, yacni intaan sharciga Midowga Yurub dhaqan gelin, haysan wax gundhig sharci ah oo heer qaran ah si loogu maareeyo xogta shaqsi ahaaneed ee cadeynta ku taala.
Waxaan dawskeygii koowaad ee tallaalka ka qaatey waddan kale iyadoo aan dawskeyga labaad ka qaadan doono Iswiidhan. Miyaan heli doonaa Cadeynta covid-ka oo shaqeynaysa?
Haddii aad dawska labaad Iswiidhan ka qaadato ayuu daryeel bixiyahu inuu tallaalka yahay dawskii labaad 2 ee 2 (2/2) Diiwaanka tallaalka ee qaranka ku soo wargelin karaa. Markaas ayaad awoodi doontaa inaad cadeyn ka hesho www.covidbevis.se taas oo muujinaysa tallaalkii la wada qaatey. Waa muhiim in cida tallaalka Iswiidhan kaa siineysa la tuso inuu yahay dawskaagii labaad si sax loogu soo wargeliyo. Waa inaad sidaas darteed hubisaa inaad haysato dhukumentiyada ku haboon oo dawska koowaad ah oo uu daryeel bixiye ama hey'adi soo saartey.
Ma suurtogal baa in Cadeynta covid-ka waddan kale oo Yurub ah laga heli karo markaad halkaas joogto? Miyaa nidaamyada wadama kala duwani ay awoodaan inay macluumad is weydaarsadaan?
Waxaad cadeyn kala bixi doontaa www.covidbevis.se haddii lagaa tallaalay Iswiidhan oo aad leedahay aqoonsi elektaroonig ah oo Iswiidhish ah. Wadamadu iskuma diri karaan wax macluumad ah oo ku saabsan tallaalka ama tijaabooyinka. Haddii lagaa tallaalay ama tijaabo lagaaga qaaday wadan kale oo Midowga Yurub ah, waa inaad raadsato sidaad wadankaas cadeyn uga heli laheyd.
Ma muwaadiniinta Iswiidhishka ah uunbaa heli kara Cadeynta covid-ka?
Waxaad u baahan tahay inaad lambarka shakhsiga ee Iswiidhisha ah haysato, oo lagugu tallaalay Iswiidhan oo aad leedahay aqoonsi elektaroonig ah oo Iswiidhish oo shaqeynaay si aad Iswiidhan ugu hesho shahaado dhijitaal ah oo Cadeynta covid-ka.
Waxay hey'ada E-hälsomyndigheten ka shaqeysaa inay dadka aan haysan aqoonsiga elektaroonig ay heli karaan cadeyn in Iswiidhan lagu tallaalay.
Waxa Cadeynta covid-ka oo shaqeynaysa la heli karaa haddii muwaadin Iswiidhish ah la yahay oo wadanka dibadiisa la degan yahay?
Hey'ada E-hälsomyndigheten uma xilsaarna inay bixiso Cadeynta covid-ka ee tallaalda lagu sameeyey wadamada kale.
Haddii lagugu tallaalay ama tijaabo lagaaga qaadey wadan kale oo ka tirsan Midowga Yurub (marka lagu daray Norway, Iceland, Switzerland iyo Lichtenstein), waa inaa